FINFINNEEN TOOFTAA GABROOMFATAA QULLAA DHAABE
Qaama Cehumsaa Adda Bilisummaa Oromo
Finfinneen handhuura Oromiyaa bakka ummati Oromoo mirgaa fi dantaa ofii qabu akka ta'e mootummaan Adda Bilisummaa Ummata Tigraay (Wayyaaneen) seeraan beeke kan fudhate tapha polotikaaf malee akeeka abbootii isaa jijjiiree miti. Akeeka Wayyaanee warri gaafas haalan har'a gabroomfataan tapha ofii erga fixatee as bahee haaluu hin danda'an. Handhuura Oromiyaa nyaachuuf erga ilkee jabeeffate, Wayyaaneen bulchiisa OPDO Finfinnee keessaa hari'uuf murteeffate. Hojjetooti bulchiisa kanaa mana jireenya ofii, mana barnoota maatii ofii, haala hojii, bakka tajaajila hawaasummaa . wkf irraa buqqa'anii Adaamaatti godaanuun gaaga'ama ulfaataa akka irraan gahu ifaa dha. Gitni gabroomfatoota Ethiopia akeeka ummata Oromoof qabu osoo hin hubatin, Wayyaaneen bulchiisa akka fedhetti ergataa jiru dadhabsiisuuf maliif Adaamaatti akka hari'u, hojjetoota ergamanii bulan maaliif akka gaaga'u hubachuuf ni rakkisa.
Handhura biyya Oromoo seenanii biyyicha dhuunfachuuf hundeen akeeka gabroomfatootaa jaarraa kudha sadaffaa keessa Yikunnoo Amlaak irraa jalqabee wal harkaa fudhaa bakka har'aa gahan. Akka haala yerootti tooftaa ofii yoo jijjiirratan malee akeekni ganamaa yoomiyyuu hin jijjiiramne. Kan nama dinqu, Haila Sillaasee irraa jalqabee tooftaa walfakkaataa dhaan biyya Oromoo dhuunfachuuf warraaqaa jiru. Ijoon tooftaa isaanii hadhaa farrummaa ofii jechoota mi'aawoo dhaan golguu dha. Fakkeenyaaf, sirna barnootaa jedhanii eenyumma ummata Oromoo irratti duulu; misooma dinagdee jedhanii qabeenya Oromoo golgoleessu; mirga hiree murteeffannoo dhugoomsina jedhanii mirga ummata Oromoo irratti abbaa of godhu. Finfinneen handhuura Oromiyyaa ta'uu seeraan beekne jedhanii guddina magaalatii aanjessuuf Oromiyaa irraa kutne fudhanne jedhu.
Tooftaa gabroomfataan ummata Oromoo ittiin dhabamsiisaa jiru hubachuuf warri rakkina qaban ni jiraatu ta'a. Gabroomfataan dachee dachaafatee hanga fudhatee hin galletti Oromiyaa dhabamsiisuu hin danda'u se'u. Har'a Finfinnee keessatti ilmaan Oromoo meeqa akka mallattoo Oromummaa ofii kan ta'e aadaa fi afaan Oromoo akka irraa haqame warri hin hubatin jiru ta'a. Gola ofii hin beekan ta'a. Ummata Oromoo dhabamsiisuuf Oromummaa keessaa haquu dha malee ilmaan Oromoo ajjesanii ykn biyyaa hari'anii fixuu akka hin barbaachisne hin galleef ta'a. Tooftaa gabroomfatooti hordofan osoo itti hin dammaqamin ummata waan hubuuf tooftaa hamaa dha.
Dhugumayyuu farreen ummata Oromoo galaana Oromiyyaa keessaa Finfinnee buqqisanii fudhachuu hin danda'an. Akka warqee Shaakisoo saanduqatti naqatanii hin galan. Akka buna Oromiyaa hin fe'atan. Akka elektirika Qooqaa, Malkaa Waakkannaa, Fincaa'aa fi Gibe Xiqqaa bakka fedhanitti hin harkifatan. Akka agadaa fi warshaalee sukkaara Wanjii fi Fincaa'aa hoomishanii hin fudhatan. Akeekni gabroomfatootaa waliigalatti Oromummaa fi Oromiyaa dhabamsiisuu ta'uyyuu, haalli Finfinnee kophaa dha. Wanti alagaan fudhatee galu hin jiru; Oromummaa irraa haqee biyya ofii godhatee taa'a malee. Oromummaa Finfinnee irraa qulqulleessuuf jedhamee afaan Oromoo, aadaan Oromoo, bulchiisni Oromoo irraa haqama. Afaan faranjiitti "ethnic cleansing" jedhama. Guddina hawaasummaa, dinagde, fi polotikaa akka hin arganne Oromoon Sulultaa, Sandaafaa, Haqaaqii, Daalattii, Bachoo maliif takaalamanii akka qabaman har'a ifa bahe. Akka akeeka gabroomfataatti hireen ummata Oromoo guddina argachuu miti. Akeekni yeroo dheeraaf golga keessa dhokatee ummata Oromoo gidiraa ture har'a Finfinnee irratti qullaatti hafe. Finfinnee bal'isanii qabaachuuf Oromiyaa irraa guddisanii kutachuu; gudina Finfinneef jecha Oromiyaa xinneessuun barbaachisaa dha jedhamee ija jabinaan as bahame. To'annoo Oromiyyaa alatti summiin warshaalee Finfinnee lagootaa fi killensa Oromiyaa akka mancaasu murtaawe. Lagooti Bulbulaa, Qabbanaa, Aqaaqii summii warshaalee fudhatanii Oromiyaatti gad yaa'u. Hireen Oromiyaa summii waarshaalee fi kosii Finfinnee fudhachuu dha jedhamee murtaawe.
Akeekni gabroomfataan Finfinneef qabu qullaa bahe. Akeekni ummata Oromoof qabu Oromiyaa fi Oromummaa dhabamsiisuu akka ta'e ragaan kana caalu hin jiru. Fedhiin gabroomfatootaa awwaala Oromiyyaa irratti biyya ofii ijaarrachuu dha. Gabroomfatooti walqixxummaa dhaan ummata Oromoo waliin jiraachuuf fedhii qabuu jedhanii warri yaadan yoo jiraatan hirmii tufanii of gowwomsuu ha dhiisan.
Gabroomfatooti akka ummataatti si gabroomfachuun nutti xinnaate jedhanii eenyummaa keeyyuu tasa dhabamsiisuuf Finfinnee irratti duula ifaa labsan. Duulli Finfinnee irratti labsame ummata Oromoof gaaffii du'aa fi jireenyaa akka ta'ee hubatamuu qaba. Ummata dhabamsiisuuf akeeka jaarraa dheeraaf dhoksanii hordofaa turan amma tuffii guddaa dhaan bakkee baasan. Ummati eenyummaa ofiif kabajaa qabu tuffii hiryaa hin qabne kana gonkumaa hin fudhatu; badiisaa qaaniif dabarsee of hin kennu. Yakki ummata irratti raawwatamu kun maqaan isaa ummata lafarraa duguugu ykn genocide jedhama. Seera addunyaa tiin dhorkaa dha. Hawaasi Oromoo bakka jirutti akka kannisa saafaa gurmuu dhaan ka'ee daba gabroomfatootaa kana ofirraa ittisuun seera dhalootaa ti. Galaana ummata Oromoo cehee eenyulle Finfinnee dhuunfachuu fi Oromummaa dhabamsiisuu akka hin dandeenye farreen ummataaf barnooti hin irraanfatamne kennamu qaba.
Yaa qabsaawota Oromoo!
Hireen qabsaawota Oromoo haala ummata Oromoo mudate sirriitti hubatanii hawaasa hubachiisuu waan ta'eef harka wal qabannee qooda keenya ha gumaachinu. Ummata keenya badiisa irraa hambisuu akeeka angafa godhannee ha warraaqnu.
Yaa ummatoota cunqurfamoo!
Akkumaa seenaa weerara Miniliki irraa beekamu, duulli ummata Oromoo irratti gabroomfataa dhaan labsamu ummatoota cunqurfamoo osoo hin gaaga'in hin hafu. Gabroomfataan cunqurfamoota addaan baasee mohe; addaan baasee bitaa jira. Ammas addaan baasee akka ummatoota keenya hin dhabamsiisne tokkummaa qabsoo jabeeffannee waliif ha dirmannu. Gabroomfataan har'a Finfinnee fi Hawaasaa kutee dhuunfatu bor magaalaa Godee, Arbaa Minci, Asoosaa, Gambeelaa . wkf dhuunfachuuf kan isa dhorku danda'u tokkummaa qabsoo cunqurfamootaa ti. Eenyummaa ummataas hin dhabamsiisu jettanii akka hin daganne. Badiisa nuuf akeekame irraa hafuuf wal ha tumsinu.
Ummata lafarraa duguuguun dhorkaa dha jettee Kamboodiya, Yugoslaviya, Ruwandaatti mormite. Ummatooti idiladdunyaa ka'anii gabroomfatoota Ethiopiatti dhekkamsa isaanii aka agarsiisan maqaa namoomaa fi seera addunyaa tiin waamicha goona.